महिला विश्वकप : प्रतिष्ठाको लडाइँ कसले जित्ला ?::local sandesh
महिला विश्वकप : प्रतिष्ठाको लडाइँ कसले जित्ला ?
काठमाडौं : फ्रान्समा जारी महिला विश्वकपमा प्रतिष्ठाको लडाइँ तेस्रो स्थानका लागि युरोपेली राष्ट्र इङल्यान्ड र स्विडेन आमनेसामने हुँदैछन्।सेमिफाइनलमा पराजित दुवै टोली जित निकाल्दै साख कायम राख्न चाहन्छन्। इङल्यान्ड सेमिफाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिकासँग पराजित भयो भने नेदरल्यान्डसँग स्विडेन स्तब्ध भएको थियो।
महिला विश्वकपमा यी २ टोली पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। अन्य प्रतियोगिता र मैत्रीपूर्ण गरी स्विडेनले १७ भेटमा १२ जित ४ बराबरी र २ हार व्यहोरेको छ। पछिल्लो पटक गत नोभेम्बरमा भएको मैत्रीपूर्ण खेल स्विडेनले २–० गोल अन्तरले आफनो पक्षमा पारेको थियो। स्विडेनले यसअघि सेमिफाइनलमा पराजित बनेको दुवै संस्करणमा तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा जित निकालेको थियो।
२००३ को उपविजेता टोलीले १९९१ मा जर्मनी र २०११ मा फ्रान्सलाई हराउँदै तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको थियो। इङ्ल्यान्डले गत संस्करणको प्रतियोगितामा जर्मनीमाथि १–० को जित दर्ता गर्दै पहिलो पटक तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। सेमिफाइनलसम्म पुग्नका लागि स्विडेनले समूह चरणमा चिली र थाइल्यान्डलाई हराएको थियो भने अमेरिकासँग पराजित बनेको थियो। उपविजेताको रुपमा अन्तिम १६ मा पुगेको टोलीले इम्मा ब्लेक्सटुनिसको गोलको मद्दतमा क्यानडामाथि १–० को जित निकाल्दै क्वारटफाइनल प्रवेश ग¥यो। क्वाटरफाइनलमा जर्मनीमाथि जित निकालेको टोलिलाई सेमिफाइनलमा नेदरल्यान्ड बाधक बन्यो।
यता समूह ‘डी’बाट शीर्ष स्थानमा रहँदै नकाउट प्रवेश गरेको इङ्ल्यान्डले अन्तिम १६ को खेलमा क्यामरुनविरुद्ध ३–० को जित दर्ता गरेको थियो। क्वाटरफाइनलमा नर्बेलाई समान ३–० ले हराएको टोलीका लागि फाइनल प्रवेशमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिका तगारो बन्यो। तेस्रो स्थानका लागि खेल शनिबार नेपाली समयअनुसार पौने ८ बजे एलिऐन्ज रिभेरामा हुनेछ। जहाँ यसअघि महिला विश्वकपको पाँच खेल सम्पन्न भइसकेको छ।